Blu RaysVaovao Mahafaly Fialam-bolySarimihetsika mahatsiravina
Famoahana vaovao vaovao avy amin'ny andian-dahatsary Vestron an'ny Lionsgate's Vestron's Series dia mandrehitra fingotra ary tonga amin'ny blu-ray sy dizitaly! Sarimihetsika mampihorohoro amin'ny valifaty ny kolontsaina 1986 The Wraith dia hiverina avy any ankoatra mba hahita mpihaino vaovao amin'ny lahatsoratray Haingam-pandeha Ary Ilay Tezitra ny fiarahamonina sy ity famoahana horonantsary vaovao an-trano ity dia feno endrika isan-karazany.
The Wraith dia miorina ao amin'ny tanàna kely atsimo andrefan'ny Brooks, izay toerana mety hipetrahana… raha tsy noho ny andian-jiolahy mahery setra mpanafika lalana. Notarihin'i Packard tsy misy indrafo (John Cassavetes), ny ekipan'izy ireo dia nandehandeha teny amin'ny làlambe mba handravan'ireo niharam-boina sy ny fiara hitetika. Ny sakaizan'i Keri (Sherilyn Fenn) no lasibatr'izy ireo farany talohan'ny nahatongavan'ilay mpamily fiarovan-doha sy fiarovan-doha miafina tao amin'ny Dodge Turbo Interceptor iray izay nitazona ireo totohondry teo amin'ny asfalà… ka maty. Ankehitriny dia hazakazaka mifanohitra amin'ny famantaranandro izao satria lasa nalan'ny lalana tsirairay ireo andian-jatovo ary namantatra ny zava-miafina The Wraith ary ny fifandraisany amin'ilay bandy vaovao ao an-tanàna, Jake (Charlie Sheen).
The Wraith dia sarimihetsika fiampitana mahafinaritra sy mahaliana indrindra ho an'ny fotoanany. Fampifangaroana tantaram-pitiavana hafahafa an'ny olon-dehibe olon-dehibe, valifaty tsy takatry ny saina, ary ny hatezerana amin'ny fiara, dia miavaka na dia ankehitriny aza. Ary hatramin'ny vanim-potoana talohan'ny CGI, ireo fiantsonan'ny fiara ireo dia zato isan-jato ara-dalàna ary mampiala voly mba hijerena samirery azy ireo manerana ny tany efitra Arizona. Ary inona no mpilalao! Ankoatr'ireo voalaza tetsy aloha dia manana Randram-baomba mahery koa i Randy Quaid ho toy ny andry sheniff and genre genre Clint Howard as the Eraserhead mijery atidoha amin'ireo andian-dàlana. Ny tantara dia somary tapaka sy maina, fa mahavoa voatifitra ary manana fientanam-po ampy hahatonga anao hirotsaka.
Toy ny mahazatra, Vestron Video dia nanentsina ity famotsorana ity hatrany am-piandohana miaraka amin'ny endri-javatra miavaka. Avy hatrany amin'ilay ramanavy, manana andian-dahatsoratra roa samy hafa ianao. Ny iray manasongadina mpanoratra / talen'ny Mike Marvin ary iray hafa miaraka amin'ny mpilalao Dave Sherrill sy Jamie Bozian. Misy fanelezana resadresaka ifanaovan'olon-tokana, ao anatin'izany ny resadresaka nifanaovana tamin'i Mike Mrvin nitantara ny nanaovana ilay sarimihetsika, ny voina nitranga rehefa maty ny olona iray nandritra ny fotoana nikatsoany, ary ny fitsanganany tamin'ny maty ary ny fombam-pivavahan'ny The Wraith. Resadresaka nifanaovana tamin'i Clint Howard momba ny anjara asany sy ny resadresaka nifanaovana tamin'i Buddy Joe Hooker, mpandrindra ny fitaterana Gary Hellerstein, ary ny mpamokatra VFXPeter Kuran ary ilay animator VFX, Kevin Kutchaver.
Resadresaka ankoatr'izay, misy featurety antsasak'adiny lehibe mijery ny toerana fitifirana The Wraith avy eo ary ankehitriny any Phoenix, Arizona, featurety isa mitokana, filaharam-pamaritana anaram-boninahitra, galerie stills, ary toetoetra / toerana fahitalavitra. Toy ny nolazaiko, ity fiara ity dia feno ny endrika rehetra. Noho izany, raha te hanana herisetra am-piarakodia hafahafa ianao, dia omeo The Wraith mitaingina.
The Wraith Azo alaina amin'ny blu-ray sy nomerika izao.
1980s2021Blu rayCharlie sheenClint HowardNick CassavetesReviewThe WraithVestron Video
Jacob Davison dia mpanoratra horohoro monina any Los Angeles, mpiara-miasa mpiara-miasa amin'i Eye On Horror, ary tia ny karazan-javatra rehetra. Manangona sarimihetsika efa ho hitany tamin'ny fijeriny izy.
James Wan, Warner Bros. namoaka ny tranofiara 'Malignant' mampatahotra
'Jackass Forever' Trailer Mahatonga ny fihenan'ny toe-tsaina bebe kokoa